यिनै हुन् जसको आज बिहे हुन जादै थियो, अघिल्लै दिन अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए – Sandesh Press
September 1, 2021 180
घटना हुन नदिन अमेरिकाले गरेको ड्रोन ह म लामा अमेरिकाकै लागि काम गर्ने अनुवादकर्ता जमरे अहमदी र पूर्वअफगान अधिकारी नसिर नजाबीको पनि निधन भएको छ । जसमध्ये नजाबीको आज (सोमबार) विवाह हुँदै थियो। उनी अफगान सेनामा अधिकृत भइसकेका व्यक्ति थिए।एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन । तालिवानले अमेरिकासंग सम्झौता गरेको भन्दै अर्को संगठन असन्तुष्ट छ । इस्लामिक स्टेटल संगठन तालिवानसंग असन्तुष्ट भएको हो । यो संगठन निकै हिं स क मानिन्छ । गत विहिवार काबुल विमानस्थलमा भएको घटनाको जिम्मा सोही संगठनले लिएको छ ।
Prevअबको सात वर्ष यी राशिमा रहँदैन शनिको महादशा, जीवन नै कायापलट हुने सफलता मिल्नेछ !
Nextकाठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! आयो यस्तो नियम कारबाहीमा परियाला ?